Fifanaraham-piarahamiasa eo amin’ ny OMACI sy ny famokarana sarimihetsika Bollywood
Vita sonia tamin’ ny fomba ofisialy androany tetsy amin’ ny tranom-boky nationaly Anosy ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin’ ny OMACI( office Malgache du Cinema ) sy ireo mpandraharaha Indiana momban’ ny famokarana sarimihetsika Bollywood.
Mifantoka amin’ ny lafin-javatra telo ity fifanarahana ity :
Fananganana hefitrano « cinema ».
Fananganana sekolim-pamokarana sarimihetsika.
Fanorenana studio ho an’ ny sarimihetsika.
Ireo rehetra ireo dia manaram-penitra avokoa mba hahafahan’ ireo mpamokatra sarimihetsika Malagasy manondrana ny sanganasany manerana izao tontolo izao. Tanjon’ ity fifanarahana ity ny hanaingana ny sehatry ny orinasa mpamokatra sarimihetsika eto Madagasikara, hoy ny tomponandraikitra, vy nahitana, Ny Rado RAFALIMANANA. Natao izao mba hahafahan’ ny roa tonta mahazo tombotsoa, hoy izy.
Anjaran’ ny Malagasy, araka izany, mitrandraka na manararaotra ny fanampiana avy amin’ ireto manam-pahaizana momban’ ny sarimihetsika.
Mba tsy ho tetikasa « sarimihetsika » fotsiny dia manana anjara toerana lehibe amin’ ny fanatanterahana azy ny fanjakana malagasy. Ohatra eo amin’ ny fanamorana ny fahazoana ny tany hanorenana ireo foto-drafitrasa, ny fanamorana ny fampidirana ireo fitaovana mifandraika amin’ ireo tetikasa…
Fanampin’ izany ny fahavononan’ ireo mpamokatra sarimihetsika Malagasy hitondra ny anjarany ho fampamorahana ny fenitra ny sarimihetsika any amin’ ny firenena efa mandroso.
Ny FMO | 15.05.2014